“ဘာ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဆိုတာမှ မရှိခဲ့ဘူး” | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Home“ဘာ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဆိုတာမှ မရှိခဲ့ဘူး”
“ဘာ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဆိုတာမှ မရှိခဲ့ဘူး”
August 14, 2017 drkokogyi
ပြဿနာ က မြန်မာနိုင်ငံ လို့ လုပ်ပစ်လိုက်တယ်။ အမှန်က ပေါက္ကံပြည်၊ ပုဂံပြည်ပါ။
သမိုင်းမှာ မြန်မာဆိုပြီး ဆွဲရေးတယ်။ ပုဂံမင်းဆက်တွေ ကို လေ့လာရင် ပျူ၊ ရှမ်း၊ မွန် သွေးနှောတယ်။ သထုံ နဲ့ ပုဂံနဲ့ စစ်ဖြစ်တာ ဟာ မွန်မြန်မာ စစ်ဖြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီလိုပဲ အင်းဝ မင်းခေါင်နဲ့ ဟံသာဝတီ ရာဇာဓရာဇ် ဆိုတာ အပြန်အလှန် သမီးပေးနှမယူထားတယ်။ ပြီးတော့ စစ်တိုက်တယ်။ ပြီးတော့ တယောက်သေ တယောက်ငိုတယ်။ အဲလို ဘုရင်သောက်ရူးတွေ ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှု နဲ့ လူမျိုးရေးစွဲ မယူလာဖို့ လိုတယ်။ သူတို့ချင်းသာ အဲလိုဖြစ်တာ၊ အောက်ခြေက တကယ်စစ်တိုက်နေရတဲ့ ရဲမက်တွေ ပြည်သူတွေကို လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုတွေ သွေးထိုးပြီး တိုက်ခိုင်းခဲ့တဲ့ သဘောရှိတယ်။
ဒါကို ပါးနပ်စွာ သမိုင်းအမြင်ရှိဖို့လိုတယ်။
အဓိက သမိုင်း သင်ရိုးညွှန်ူတမ်း အသစ်ပြန်ရေးဆွဲဖို့ လိုတယ်။
ဘာ ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော် ဆိုတာမှ မရှိ။
ဒီဒေသ မှာ တိုင်းမ်လိုင်း Time line ဆွဲ၊ ဟောဒီနေရာမှာ ပေါက္ကံပြည်၊ ဟောဒီမှာ ဓညဝတီ၊ ဟောဒီမှာ သထုံ စသဖြင့် မြို့ပြပဒေသရာဇ်နိုင်ငံကလေးတွေ ခေတ်ပြိုင်ဖေါ်ပြ၊ အဲဒီကမှ အင်အားကြီးတဲ့ ပဒေသရာဇ်က စစ်မက်နဲ့ အင်ပါယာချဲ့ထွင်ခဲ့။
ဘာ မြန်မာ၊ ဘာမွန်၊ ဘာရှမ်း မှ မကွဲ ဘူး။
နန်းတွင်းကို သေချာ နန်းရိုးကို သေချာသင်။
ဒီဘုရင်က မွန်စပ်၊ ဒီဘုရင်က ပျူစပ်၊ ဒီဘုရင်က ရှမ်းစပ်၊ ဒီဘုရင်က ကသည်းစပ်(ဝါ) ကုလားစပ် စသဖြင့် ပေါ်လာမယ်။
ဘာ လူမျိုး မှ ထူထောင်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး.
စကတည်းက လူမျိုးပေါင်းစုံ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံသွေးနှော နေတဲ့ ဘုရင်တွေ အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။ ဒီအရပ် ဒီဒေသကြီးမှာ ဘယ်သက္ကရာဇ်မှာ ဘယ်အရပ်မှာ ဘယ်သူ၊ ဘယ်အရပ်မှာ ဘယ်သူ အုပ်ချုပ်တယ် စသဖြင့်သာ သမိုင်း ကို တိုင်းမ်လိုင်းဆွဲ ရေးသားဖို့လိုတယ်။
ပုဂံမတိုင်မီက ပျူတွေရဲ့ နိုင်ငံတွေ ရှိတယ်။ ပုဂံခေတ်ပြိုင် ရခိုင် ဓညဝတီ အစ ဝတီလေးရပ်နိုင်ငံတွေ၊ သထုံ ဟံသာဝတီ၊ ကမ္ဘောဇ နဲ့ ဟိုးမြောက်ဘက် ဒူးဝါးတွေ၊ အနောက်ဘက် ဆလိုင်းစော်ဘွားတွေရဲ့ သမိုင်းတွေကိုပါ တိုင်းမ်လိုင်းဆွဲဖေါ်ပြမှ ဒီပြည်ထောင်စု ဒီလို သန္ဓေတည် လာတယ် လူတွေ အမြင်တည့်မယ်။
အဲလို မဟုတ်ဘဲ ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော် လို့ သင်နေသရွေ့ လွဲနေ၊ ဝေးနေမှာပဲ။
ပေါက္ကံပြည်၊ အဝရွှေပြည်၊ ကုန်းဘောင်ရတနာသိဃ်ပြည် လို့သာ နာမည်တွေ ပေးခဲ့တယ်။ ဘယ်တုန်းကမှ မြန်မာပြည် ဆိုတာ မပေးခဲ့ဘူး။
ဒါ ကျွန်ဖြစ်မှ အင်္ဂလိပ် က ခေါ်တဲ့ ပေးတဲ့ နာမည်ပါ။
သမိုင်းကို စနစ်တကျ လေ့လာ၊
ပြည်ထောင်စု မူ ကို စနစ်တကျ အုတ်မြစ်ချဖို့ လိုတယ်။
ပညာရေးချို့တဲ့လို့ ပြည်ထောင်စု ချို့တဲ့ နေတာပါ။
တချိန် က အင်္ဂလိပ်လက်အောက်က လွတ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဆရာတို့ ခုလို ပြဌာန်းခဲ့တယ် ပဲ မြင်ပါတယ်။
ခု ခေတ်နဲ့ မလျော်ညီတော့ပါ။
နိုင်ငံတကာ စံချိန် စံညွှန်းအညီ တိုင်းမ်လိုင်းဆွဲပြီး ဒီဒေသကြီးမှာ လူမျိုးစုတွေ အပြိုင် နေထိုင်ထူထောင်ခဲ့ကြတာကို ဖေါ်ပြရေးသားပြုစုနိုင်မှ ပြည်ထောင်စု မူ ကို ဦးတည် တဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဘယ်လူမျိုးကမှ ဘယ်လူမျိုးထက် မသာတဲ့(ခုက မြန်မာတွေကပဲ တခြားလူမျိုးတွေထက်သာသလိုလို၊ မြန်မာတွေကပဲ တိုင်းပြည်ထူထောင်ခဲ့သလိုလို)
လူမျိုးတိုင်း လူကောင်း လူဆိုး၊ တရားမှု၊ မတရားမှု၊
“လူ” ဆိုတာ ဘာလဲ သင်ယူသော သူ တို့ သိသာလာမြင်လာ စေမယ့်၊ သင်ရိုး ဖြစ်ဖို့လို။
စနစ်ရဲ့ သားကောင် တွေ ဖြစ်ခဲ့ကြတာကိုသာ ဖေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့ လို။
သမိုင်းသင်တာ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် ရှင်သန်ထက်မြက်အောင်၊ ဇာတိသွေး ဇာတိမာန်တက်ကြွအောင် ဆိုတဲ့ ပေါတောတော ခပ်နိမ့်နိမ့်အယူအဆ အတွေးအမြင်တွေ ကနေ၊
သမိုင်းသင်တာ သင်ခန်းစာ ယူဖို့၊ ဆင်ခြင်စဉ်းစားသုံးသပ်တတ်စေဖို့၊ အသိအမြင်မြင့်မား ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်ဖို့
ဖြစ်အောင် သင်ကြဖို့ လို နေပါပြီ။
← Three Myanmar Soldiers caught robbing handphones in Mandalay but their superiors illegally rescued them from police station မန္တလေးမြို့ လည် နန်းမြို့ အတွင်းမှာ တပ်စွဲ နေပြီး ကျုံးဘေးထွက် လုယက်စားနေတဲ့ စစ်တပ်
မလေးရှားယူအဲန်အိတ်ခ်ျ စီအာရ် ကိုမေးချင်တဲ့ မေးခွန်းတွေ →
One thought on ““ဘာ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဆိုတာမှ မရှိခဲ့ဘူး””
” ငပြူး က ပြဲ တဲ့ စကား ”
” ပြည်ထောင်စုကြီးတော့ ပြိုကွဲ မခံနိုင်ပါဘူး ” ဆိုပဲ။
ဘာနဲ့ တူသလဲ ဆိုတော့၊
မိစုံ ဖစုံ ရှေ့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပေါင်းသင်းစောင့်ရှောက်ပါ့မယ်လို့
ယူကထဲက နှိပ်စက်နေတဲ့ လင်ဆိုးမျိုး။
မယား ကို ထိုးကြိတ် ရိုက်နှက်၊
ဘာမှ လုပ်ကိုင်မကျွေးမွေးတဲ့ အပြင်၊
ပါလာသမျှမိဘအမွေအနှစ်တွေ ယူသုံးဖြုန်း၊
နေ့ရှိသမျှလူရုပ်မပေါ်အောင်
မိဘရင်း ဆွေမျိုးရင်းတွေက မခံနိုင်လို့
ငတို့သမီး ငတို့ပြန်ခေါ်သွားတော့မယ် …..ဆိုတဲ့ အခါ
ချစ်ခြင်းကို မခွဲပါနဲ့ ပြောသလိုမျိုး။
ပြီးတော့ ခြိမ်းလား ခြောက်လား၊
မယားခိုးမှုနဲ့ ရဲတိုင်မယ် ဆိုလား ရှိသေး။
စစ်တပ်က ပြစ်မှုကြီးလို မှိုင်းတိုက်ထားတော့
ပြည်ထောင်စု က ခွဲထွက်မယ် လို့
ပြောတောင် မပြောရဲ ကြပေတော့ဘူး။
လက် မခံနိုင်ရင် တခြားဟာနဲ့ ခံ။
ပြည်ထောင်စု ဆိုတာ မင်းတို့ပိုင်မဟုတ်ဘူး။
ငတို့ ဘိုးဘွားအစဉ်အဆက် ငတို့မြေ ငတို့ထီး ငတို့နန်းနေလာတာ။
ငတို့မှာ ခွဲထွက်ပိုင်ခွင့် ရှိတယ်။
မင်းတို့သာ ဒို့မြေ ဒိုပြည် ဆိုခွင့်ရှိတာ မဟုတ်။
ငတို့လဲ ဒို့မြေ ဒို့ပြည် ဆိုခွင့်ရှိပြီးသား။
ရဲရဲပြော၊ ရဲရဲရေး၊ ရဲရဲဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ကြပါ။
” ပြည်နယ်ခွဲထွက်ပိုင်ခွင့်ဟာ ငတို့မွေးရာပါ အခွင့်အရေးပါ “။
Power sharing like in Malaysia is the BEST. But don’t forget that MAJORITY could easily rule over all the country but MINORITIES alone could never
If U play with fire, you get burned!
” အာဇာနည် ဘာဘူကြီးကိုသာ လွမ်းမိတော့ “
ဘင်္ဂလား​ဒေ့ရှ်​ရှိ ရိုဟင်​ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းအတွက်​ မ​လေးရှား ကူ
drkokogyi on New to France, migrants cheer…
drkokogyi on နိုင်ငံသားပဲ ရှိရမယ်။ အားလုံးတ…
Child sex offence education သက်ငယ်မှုဒိမ်းမှုများ ပပျောက်စေရေးအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေး ဇာတ်လမ်းတိုလေး
Myanmars get the ဒေါင်း "Peacock-culture" from Indian Kalars